Ahoana no mamantatra sy manafoana ny parasy amin'ny alika ao an-trano? | Tontolo alika
Ahoana no mamantatra sy manafoana ny parasy amin'ny alika ao an-trano?
Fantatsika fa parasy kely ny parasy, saingy azo ovaina amin'ny fahitana tsotra izany. Ny tahan'ny fiterahana izay an'io bibikely kely io dia somary avo ary izany dia mety hanasarotra ny fanesorana azy ireo.
Misy ny azo antoka lafin-javatra izay afaka manampy antsika hahafantatra raha mipetraka ao an-tranontsika ny parasy, ka diniho tsara.
1 Ahoana ny mamantatra fa manana parasy ny alika?
2 Ahoana ny famongorana ireo parasy izay nipetraka tao amin'ny alika sy tranonay?
3 Apetraho amin'ny toerana nisy ny alikanay ny fitafiantsika sy lamba firakofanay ary lamba firakotra
4 Ahoana ny fomba hisorohana ny fisehoan'ny parasy amin'ny alikantsika?
Ahoana ny mamantatra fa manana parasy ny alika?
Amin'ny ankapobeny, ny parasy dia manaikitra ny tongotsika, ny kitrokely ary koa ny tapany ambany amin'ny tongotsika. Matetika ny mahita azy ireo amin'ny tany ary jereo izy ireo mitsambikina mankany aminay mba hahafahantsika miditra amin'ny rantsam-batantsika ambany.
Ny manaikitra am-parasy dia tsy mitovy amin'ny navelan'ny moka, Matetika mena izy ireo miaraka amina teboka toa voam-bary ary tsy fahita amin'izy ireo ny fisehoana fotsy toy ny an'ny moka. Ny endrika ary koa ny habeny dia mety tsy hitovy raha misy ny mahazaka aretina.
Manaikitra matetika ny volo mitranga izany amin'ny ora rehetra amin'ny antoandro, izay tsy mitranga amin'ny kaikitry ny bikan'ny fandriana izay mazàna mandritra ny alina.
Raha manana parasy ao an-tranontsika isika, ny mahazatra dia samy manana manaikitra ny mpikambana tsirairay ao aminy, izay mazàna samy hafa raha ampitahaina amin'ny kaikitry ny moka na ny fandriana satria mifantina kokoa izy ireo.
Tian'i Fleas hatrany ny biby fiompy. Raha hitantsika fa ny alikantsika dia manana fitondran-tena maharikoriko sy voany matetika, misy ny ahiahy fa manana parasy izy. Raha mandinika an'io karazana olana io amin'ny ririnina isika dia fantatsika fa parasy izany.
Ahoana ny famongorana ireo parasy izay nipetraka tao amin'ny alika sy tranonay?
Ny fepetra lehibe tsy maintsy raisintsika dia ny fanadiovana faobe, satria zava-dehibe ny fanadiovantsika vovoka, esory ny akanjo eny ambony gorodona, esorintsika ny gorodona ary koa ny karipetra sy ny farafaran'ny alikanay andao matetika hanasa ireo vilany izay fihinan'ny alikantsika sy alehany. Amin'izany isika dia hanafoana ireo toerana azon'ny olitra afenina ary rehefa manadio ny gorodona isika dia esorintsika ny loto ary koa ny parasy sy ny olitra ao aminy, amin'izany fomba izany no hanakanantsika azy ireo tsy hamokatra.
Apetraho amin'ny toerana nisy ny alikanay ny fitafiantsika sy lamba firakofanay ary lamba firakotra
Tsy maintsy manasa lamba amin'ny milina fanasan-damba isika amin'ny alàlan'ny manasa tsingerina amin'ny hafanana avo indrindra, satria ireo no tompon'andraikitra amin'ny parasy dia esorina.
Rehefa madio ny gorodona, azontsika atao ny manosotra azy amin'ny vinaingitra paoma kely na koa vinaingitra divay, satria io vokatra io dia tompon'andraikitra amin'ny famonoana parasy ary koa karazana bibikely. Azontsika atao koa ny mametraka sira amin'ny karipetra ary koa amin'ny sofa na amin'ny zorony rehetra.
Toy izany koa, afaka mampiasa vokatra simika sasany isika hahafahana manafoana ny parasy ary eo amin'izy ireo no azontsika resahina ny boric asidra.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fisehoan'ny parasy amin'ny alikantsika?
Raha efa nikarakara ny fitsaboana ny biby fiompinay izahay ary nanadio ny trano iray manontolo, amin'ny fomba mitovy tsy maintsy mihazona fahadiovana tena tsara isika. Zava-dehibe ny fanasana tsy tapaka ny zava-drehetra ary ny fampiasana fanafody voajanahary izay manohitra ny parasy indraindray.
Raha misy zaridaina misy ahitra ao an-tranontsika, soso-kevitra ny hitahiry izany ho fohy amin'ny fotoana rehetra satria mazàna izany dia manintona parasy, ankoatry ny fampiasana dehumidifiers ho azy.
Toy izany koa, tokony hitandrina tsara isika zanatany parasy hita tao amin'ny vatan'ny saka na alika nania hita eny an-dalana, raha mikasika azy ireo isika na raha manakaiky azy ireo isika, dia mety hitera-doza toa antsika ny biby fiompy ao an-tranontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Ahoana no mamantatra sy manafoana ny parasy amin'ny alika ao an-trano?
Anaran'ny alika, ny fomba hisafidianana azy ireo sy ny heviny